Guddoomiyihii Ismaamulka Gaarsia oo dammaanad lagu siidaayey loona haysto arrin haraysay Puntland
September 15, 2020 Xuseen 14
Gudoomiyihii Ismaamulka Garissa ee gobolka Waqooyi-bari dalka Kenya Cali Bunow Qorane ayaa saaka la soo taagay Maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi iyadoona dammaanad lagu sii daayey.
Guddoomiye Cali Buunow Qorane oo ah shaqsi siweyn looga yaqaan deegaamadaasi ayaa waxaa loo haystaa eedaymo musuq maasuq oo u badan lunsashada dhaqaalihii loogu talagalay wacyigelinta Coronavirus ayna kamid yihiin
1. In uu ku guuldareystay maamulka lacagihii Dadweynaha Ismaamulka Soomaalida-Kenya oo uu musuqmaasuqay.
2. In uu si gaar ah uga xooleystay dhaqaalihii loogu talo-galay La dagaalanka cudur-ka COVID19.
3. 12malyan oo dollar, oo loogu talogalay COVID19-ka, aana meelna loo haynin, isaguna masuul ka ahaa.
Cali Bunow ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay oo uu ku tilmaamay iney yihiin kuwo aaney waxba ka jirin, waxaana xusid mudan in laga mamnoocay inuu tago xafiisyada maamulka ee degmada Gaarisa.
kala fogaa ciwaanka iyo anshaxa saxaaffaddu!
kuwan sidaa wax u qoraya ay dadku oranayaan weriyeyaal baa la xirey markii sharci lala tiigsado.
lagana dalbo caddeymo ay ku xoojinayaan qoraalkooda. Haddiiba ay jirto xatooyo, musuqmaasuq iyo wax is daba marin, ma heli kartaa caddeynteeda maanta. Haddii aad haysaan in ay Puntland ka jirtana maxaad u soo bandhi weydeen. Haddiise aada soo bandhigi karin dheg ka maqal mooyee wax kale ma kuu bannaantahay adiga oo raacaya xeerarka tebinta saxaafadda in aan bogga hore isaga oo weliba Ciwaan far waaweyn ku qoran affeefna aad wadan aad iska soo qortaan.
Saxaafadda yaan la xag-xaganin!
Wariyuhu waxa uu isticmaalay erayga HARAYSAY, waa la oran karaa maxaad ka waddaa eraygaa, laakiin in lagu soo boodo maaha. Waxa loo qaadan karaa in uu wariyuhu ka wado in la BARAARUGO maaddaama ay jidho maamul xumo baahsani. Markii ay maamul xumo jidho wax walba waa suurtagal in ay dhacaan. Majiraan hay’aad tayo leh oo madaxbannaan, majiro garsoor tayo leh oo madaxbannaan, majiro baarlamaan tayo leh oo madaxbannaan; marka, maxaa lagu diidayaa in uu san musuqmaasuq haray hay’aadka ka hawlgala Garoowe iyo dhammaan Soomaaliya?
Mar walba Soomaaliya waxa ay kaalinta koowaad ka gashaa MUSUQMAASUQA caalamka oo idil! Waxaa ugu wacan dee maba jiraan hay’aad dawli ah oo madaxbannaan oo tayo leh oo is waardiyaynaya. Hay’ad walbaa sida ay doonto ayay ugu takri fashaa waxa ay hayso; yaa taa diidi kara?
Inta aadan dhisin hay’adda madaxbannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaa ka horreeya in aad dhisto garsoor madaxbannaan oo tayo leh. Waxaa kale oo ka horreeya in aad leedahay baarlamaan aan ku milmin xukuumaddii uu ilaalin lahaa.
Waxaa kale oo ka horreeya in aad leedahay xildhibaanno ama xukuumad ama garsooayaal ama shakhsi kasta oo haya xil mxasaasi ah oo halbawle u ah QARANKA oo aan haysan JINSIYAD kale oo aan tan Soomaaliga ahayn, iyada oo la ilaalinayo u DAACAD ahaanshaha DANTA QARANKA (leadership & Integrity).
Haddaba, intaasiba haddii aysan jirin, maxaa diidaya in iska daa musuqmaasuqe waddankaba la iibsado sidii horay u dhacday ee BADIHII miiska loo saaray, iyo sida hadda socota ee dekedihii iyo dhulkiiba ay xaraashka u yihiin. SOOMAALIYA WAA MASHRUUC ninkii alifay waa wasiir ka mid ah wasiirada ugu tunka weyn xukuumadda hadda jidha, ma mashruucuu buu dhinaciisa ka galay?
Marka, dhalinyaradan wax soo qorta iyo kuwa heesaha ku cabiraba waa mahadsan yihiin. TUUG maafiyo ah baa waddankii ku degtay, waana in si kastaba loo qaawiyaa. Ninka diiddan in uu dawlad wanaag hirgeliyo, oo aan rabin in lala xisaabtamo, ujeedadiisu waa maxay? Saw caddaynba halla waayo maaha. Saw yaan la isdaba gelin maaha. Saw waxa aan rabo aan sameeyo maaha. Saw dadka kii isoo fiiriyaba waa kacaan diide aan xiro maaha. Saw anaa iri ee yaan layga daba oran maaha? Saw aniga mooyee cid kale yay noolaan maaha.
Haddaan u soo noqdo, Qorane waa guddoomiyaha Gaarisa, meesha lagu maxkamadeeyeyna waa Nayroobi, ragga soo qabtayna waa guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Suurtagal matahay inta Deni la soo qabto in Muqdisha lagu maxkamadeeyo?
Jaawaabtu waa maya, waayo Garoowe waxa ay u haysataa in Muqdisha ay waddan kale tahay oo aan lagaba xukumin. Wixii la oran jiray waddaniyadda waxa beddelay qabaliyad aad u fool xun, oo aan meelna ina gaarsiinayn. Waxaa la yiri bil saddex guragaana way kaa kaxaysaa meelna kuma gaarsiiso, durtaba qud cur baad galaysaa.
Intaa waxaa dheer, iska daa in lagu maxkamadeeyo e waxa maanta loo fadhiyaa hawl ay dawladdu leedahay oo ay ku haystaan! Annaga ayaa maamuladii gobolada ah isla mar ahaantaana annaga ayaa dawladdii dhexe ah!! Waa tan maanta loo fadhiyo garteeda.
Marka aad fiiriso, dhammaan maamulada Soomaaliya waa wada bil saddex. Ka soo bilaw maamul beeleedka ugu kooneeya ee Hargaysa kaligii isku cumaamaday illaa kan fadhigiisu yahay Kismaanyo ee Kuukuuyada u galay, waa wada bil saddex. Meel ay gaarayaan majirto, gud curkiina waa soo dhowyahay. Wax qaranimo lagu waayey, waa habeenkii xalay tagay in qabyaalad lagu helo; BIL SADDEX MEELNA KU GAARSIIN MAYSO, waa taas xaqiiqdu.
Ugu danbayn, waa hal hasykeenni ahaa SSC aniga ayaa iska leh; BIL SADDEX ANIGA IMA XUKUNTO. Garoowe iyo QASWADE qaran-dumis ahi aniga ima metesho. Hargaysa & nin BALOODH dhaca aniga ima metesho. Jamhado qaran-dumis ahi aniga ima xukumaan. Oday BARAKACE ah oo shalay soo xulay WIILASHII ay dhaleen aniga ima metelaan.
Mandaqadda SSC & shicibka Soomaaliyeed oo dhan halloo oggolaado xaqooda DASTUURIGA ah ee ay u leeyhiin in codkooda si xor ah oo xalaal ah u dhiibtaan. Shalaybaa naloo garba qabtay Garoowe, maanta haddii lagu daro, waa ka fiirsan doonnaa fdawlad danbe oo Soomaaliyeed, go’aan baanna qaadandoonaa. Wbt
Khuraafaad iyo cantarabaqash neceybka reer Puntland laga dhadhansanayo oo lagana dheehan karo ayaad sidaadii sabuuradda ku camirtay. Waxaad ku dinaahday waxan aan soo naqliyay:
(a) “Suurtagal matahay inta Deni la soo qabto in Muqdisha lagu maxkamadeeyo?”
Maxaa Deni Muqdisho loogu maxkamadeynayaa oo uu ka galabsaday? Dembiga uu Xamar ka galay bal noo sheeg. Su’aashaas kaa soo dinaahday jawaabteedu waa sidan; marka ilma-adeerradaa sida Cali Mahdi, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Xassan Qoslaaye, Shiikh Shariif, Xassan Cali Kheyrre, Gooddax Barre, Qaasim Salaad iyo kuwa kale ee dembiyada qaran dalka ka galay inta Xamar lagu maxkamadeeyo oo xabsiga loo taxaabo ayaynu Siciid Deni idiin keenaynaa. Inta ka horraysa iska hantaatac.
(b) “Wixii la oran jiray waddaniyadda waxa beddelay qabaliyad aad u fool xun…”
Marka aydin idinku mooryaaneey ku dhaqmeyDAAN qabyaaladdu way idin la quruxbadantahay, marka la iskaga kii difaaco se “way foolxuntahay”. Caqli dameer iga dheh! Idinka ayaa billaabay ee adkeysinkeeda yeesha maandhe.
(c)”hawl ay dawladdu leedahay oo ay ku haystaan! Annaga ayaa maamuladii gobolada ah isla mar ahaantaana annaga ayaa dawladdii dhexe ah!!”
Asaasaq waxaad tahay faciisu uu waa hore hooyday oo 1969kii weli taagan mar haddii aad “dowlad dhexe ku hadaaqayso annaga oo 2021ka ku sii siqeyna. Waa run, wax “dowlad dhexe” la yiraahdo ma jirto oday, waxaa jirta “dowlad wadaagnimo”. Cid Xamar looga soo taliyo ama looga soo talin karo ma jirto ee maandhe “Care Home” iskaga xaroo. Ama waa LA WADA DOWLADEYSAN ama waa LA KALA DOWLADEYSAN, waxii intaas ka baxsan waa dinaah meel cidla ah ka yeeray.
Wax SSC la yiraahdaa iyana ma jirto, waa magac bug ah. Beel ma aha oo deggaan na ma aha. Degmada Cayn iyo Sanaag waa Puntland 100%, Sool na 60% baa Puntand ah. SSC maxay tahay markaasi?
Garoowe adiga oo hinaaskeeda saxraha Cadaado bogga dhulka ku haya ayay Dubay noqonaysaa ee sidaas u la soco, iyada oo xor ah.
KAMAU/TESFAYE- Soomaalida ka dhex bax: waa lagu fahmay! Mar dhow waa kusoo qabahaynaa
‘Rakaha’ waa Af Oromo(raka), adiga ayaa an lagaa hayaa oo meel kasta ku soo qora; in aad abtirsanaysay ismaad ogayn illayn caqligaas ba ma lihid ee. Markii aad lahjaddaadii Oromiyada ahayd ku faraggubyootay teer iyo dorraato Oromo Afsoomaaligeenii annaga ee xalaasha ahaa ayaad dib ugu huleelatay, miskiin.
Ku seexo oo ku soo toos, ama waynu WADA DOWLADEYSAN ama waynu KALA DOWLADEYSAN, laakiin marna ha ku riyooninna in aydin INOO DOWLADESYAAN. Taasu waa calaacashaas oo ay timo ka soo yaaceen. Khuraafaadka aad sabuuradda ku xarxarriiqdo in laga masaxayo oo runta iyo xaqa laga dambeysiinayo iyana ku talagal oday. ‘Care Home’ Xamar miyaa laga helaa kollay Cadaado daar ba ka dhisna ee?
NINKA HILLAAC LA BAXAY WAA ‘ BACAAC’ WAA ADHI CIYAYA, BAL MAQAALKA AAN CINWAANKIISA IYO QORAALKIISU IS LAHAYN BUU DIFAACAYA, MARKAASUU KHURAAFADA SHUBAYA IYO ITOBIYAN BAA AFSOMALI BARTAY OO HALKANB WAX KU QORA, WAAR YAA WAKHTI ADIGA OO KALE KUGU LUMINAYA, DHAKHTARKA DADKA WAALAN IN LAGU GEEYO WEEYE, MARKAASAAD LEEDAHAY DAD BAA HALKAN INNOO SOO GALA, UFFF
Waa wax laga xumaado in ay saxaafad sheegtaan kuwa website-kaan iska leh,waxay maqleen waxbaa la mucaaradaa,so discussing
Maxaa ka khuseeya PUNTLAND.. Ninkaan PUNTLAND wax loo saar..
Ujeedad ugu weyn in Puntland times beenta u qorto waa soo jiido dad badan oo qolk ha la soo galo waa dhaqan eey leeyihinn dhamaan warbaahinta tabliodka loo yaqaan, laakiin waxaa ka liita kuwa soo gala iyo kuwa link u ogolaada, waxanse qabaa inaad dawladda puntlnd waxba yeeleyn
Kkkkkkkkkkk maanta kii cuqdadda qabay cinwaanka uu meesha soo dhigay fiiriya, naag masayrsan sideedii waxaa u handla kuwa calosha ka buka ee adduunka lagu ciilay, wuxuu ku qafiifay inuu puntland iyo madaxdeeda been ka sheego, hadalkiisa waxaa ku farxo farmaajo iyo kuwa sidiisa oo kale iyagoo ciil qaba dhasha oo iyagoo wali ciilqaba dhinta kkkkkkkkk subxaannallaa, sxb puntland iyo shacabkeedu laangaab iyo farmaajo waxbo waa ka qaadi waayeen ee meel iska fariiso ha xiiqine kkkkkkkkkk waligaaba afka furo miskiin tuugsanaya ayaad u egtahay oo indha mirigmirig ka siinaya kkkkkkkkk bal dib isu xisaabi intii aad calaacalka iyo aflagaadada iyo habaarka sooqoraysay wali ma aragtay wax is beddel ah oo puntland ku dhacay waa maya kkkkkkkkk waa maxay sababta haddee waxbo ma yeeli kartid puntland waayo laangaab xunbaa tahay oo gacantiisa iyo afkiisa aysan meelba gaari Karin kkkkkkkkk waligaaba qayli kkkkkkkkkkkkkk
Kanu wuxuu ku qadhaabataa magaca PUNTLAND
u malaynmaayo inuu yahay dadka uu magacooda wato
Ee Waa qof ay cuqdadi ka buuxsantay
Wallee odayga Habarta wax loosaar
Wallee kuwa webkaan qora Puntland waxloo Saar
Balse aan eegno ilaa meesha ay lagadho cajiib!!!
Titleka iyo Warbixinta ismalahan” Adminka waqtigaas hurdo ayaa kasoo kacaan filaaa maxaa yeelay dhamaan Webebka Af Somaliga ku hadlo waa Wada Coppy and Paste√√√
WAA MESHA UGU MUSUQ MAA SUGSAN KENYA HADANA IMFTA MA SOO QAADATO MAXAY KU DHACDAY HADA WADANKENA WAA KABAXAYAA FARMAAJO MARKUU YIMID ILAHY NASOO CALI WADENKA HA XASILEE